लकडाउन मोडालिटी : सरकारी कार्यालय अब २ सिफ्टमा | eAdarsha.com
लकडाउन मोडालिटी : सरकारी कार्यालय अब २ सिफ्टमा
व्यक्तिहरुको पैदल आवागमनलाई खुला, मोटरसाइकलमा चालकमात्र
सरकारले सरकारी तथा निजी कार्यालय र बैंक, वित्तीय संस्थाका कार्यालय दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
कोरोना महामारी रोकथामका लागि सुरक्षात्मक उपाय अपनाउन र कर्मचारीबीच दूरी कायम गर्न कार्यालय बिहान ८ देखि १ र दिउँसो १ देखि साँझ ६ बजेसम्म चलाइने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले निर्णय बिहीबार सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले असार १ गतेदेखि सबै सरकारी, निजी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यालय २ सिफ्टमा सञ्चालन हुने जानकारी दिए ।
सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आर्थिक वर्षको अन्तिम समय भएकाले धेरै काम हुने र कार्यालयमा पनि भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने भएकाले दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्न लागिएको बताए ।
सरकारले चैत ११ गते लकडाउन सुरु गरेदेखि अत्यावश्यक सेवाबाहेक अन्य सरकारी कार्यालय बन्द रहँदैआएका थिए ।
उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, पसल र डिपार्टमेन्ट स्टोर खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । सपिङ मल भने बन्द रहने छन् ।
यस्तै, सरकारले उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, पसल र डिपार्टमेन्ट स्टोर खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । सपिङ मल भने बन्द रहने छन् ।
व्यक्तिहरुको पैदल आवागमनलाई खुला गरिएको छ । मास्क अनिवार्य लगाउनुपर्ने भीडभाड नगरीकन हिड्नुपर्ने सरकारको निर्णय छ ।
साइकल र मोटरसाइकल चल्ने दिने भनिए पनि मोटरसाइकलमा १ जनामात्र चढ्न पाइनेछन । जोरविजोर आधारमा निजी सवारी साधनमा चालक बाहेक अन्य २ जनामात्र चढ्न पाउनेछन् ।
जोरबिजोर प्रणाली काठमाडौं उपत्यका भित्र र अन्य जिल्लाको हकमा जिल्लाभित्रको लागि मात्र हो ।
निजी क्षेत्रबाट प्रवद्र्धित विकास आयोजनाहरु निर्वाध रुपमा संचालन हुनेछन् । विद्युत् अयोजना, निर्माण काई संचालन गर्न निर्माण सामग्री चाहिने हुने भएकोले नदी तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन्, ढुवानी र बिक्री खुला गरिएको छ ।
क्वारेन्टाइनका लागि खोलिएका होटल बाहेक अन्य होटल खुला गर्न पाइने छैन
रेष्टुरेन्टबाट प्याकिङ तथा टेक अवे माध्यमबाट सेवा दिन सकिने छ । क्वारेन्टाइनका लागि खोलिएका होटल बाहेक अन्य होटल खुला गर्न पाइने छैन । सिनेमाहल, पार्टी प्यालेस, नाइट क्लब, डान्स बार बन्द गर्नुपर्नेछ ।
यो नियम २१ दिनसम्म कायम रहने छ । पछि अवस्था हेरी आवश्यक हेरफेर गर्न सकिने सरकारको निर्णय छ ।
खोल्न नपाइने क्षेत्रहरु :
शैक्षिक संस्था (स्कुल, कलेज, ट्युसन सेन्टर, शैक्षिक तालिम केन्द्र आदि)
अनुमतिबााहेकका आन्तरिक र अन्र्तर्राष्ट्रिय उडान
तोकिए बाहेकका अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाकाबाट हुने आवतजावत
सबै प्रकारका सभा, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार
सबै प्रकारका प्रदर्शन, सभा, सम्मेलन
सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्सबारलगायतका मनोरञ्जन स्थल
सार्वजनिक पुस्तकालय, संग्रालय, चिडिया खाना
स्पा, सैलुन र ब्युटी पार्लर
स्विमिङ पुल, जिम खानालगायतका हेल्थ क्लबहरु
समूहमा खेलिने खेलकुद र खेल मैदानमा हुने प्रस्तुतिहरु
सबै प्रकारका धार्मिक तथा सामाजिक स्थलहरु
यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधन (पर्यटन सवारी साधनसमेत)
जोर–बिजोर गरेर चलाउने निजी सवारी साधन बाहेकका अन्य निजी सवारी साधन